Singapaoro: Nogadraina Ilay Bilaogera Noho Ny Fanaovana Fanamarihana Fanavakavaham-bolokoditra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Desambra 2017 3:54 GMT
(Marihina fa tamin'ny 7 Oktobra 2005 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
Nogadraina ireo Singaporeana roa rehefa voampanga tamin'ny famoahana fanehoan-kevitra manavakava-bolokoditra antserasera, hoy ny tatitry ny ChannelNewsAsia .
Voasazy an-tranomaizina iray volana i Benjamin Koh Seng Huat, 28 taona, ary ankoatra izany i Nicholas Lim Yew, 25 taona, dia voasazy higadra iray andro tany am-ponja sy handoa onitra faratampony 5.000$ . Samy voampanga teo ambanin'ny Lalànan'ny Fiokoana avokoa izy roa ireo .
Tamin'ny voalohany dia voalaza fa nanao tatitra diso ny fampitam-baovao tamin'ny filazana fa bilaogera i Nicholas Lim. Taty aoriana vao fantatra fa namoaka fanehoan-kevitra tsy mendrika loatra momba ny Miozolomana izy tao amin'ny tranokala fanehoan-kevitra ho an'ny ho an'ireo tia alika .
Voalaza anefa fa nanao fanehoan-kevitra manavakava-bolokoditra nitovy tamin'izany tao amin'ny bilaoginy, Phoenyx Chronicles, ao amin'ny www.upsaid.com i Benjamin Koh, izay niasa tao amin'ny toerana fikarakarana alika. Niaiky izy fa meloka tamin'ny fiampangana.
Rehefa nandalo fampanoavana, nilaza i Richard Magnus, Lehiben'ny Mpitsara ao amin'ny Distrika fa nanitsaka ny tsipika mena ireo olona roa ireo tamin'ny alàlan'ny fanitsakitsahana ny fitsipika fototra tamin'ny fomba maniratsira. Nilaza izy fa ilaina ny fampiharana ny sazy mba hisorohana sy hamehezana ara-potoana ny fihetsika manohintohina toy izany .
Nilaza ny mpitsara fa mety hiteraka korontana ara-tsosialy ny fanamarihana masiaka sy mivantambantana mikasika ny resaka ara-tsosialy sy ara-pinoana na inona na inona fitaovana filazam-baovao na sehatra fifanakalozan-kevitra nampiasaina hilazana izany, ary tokony hanaja ny firazanana hafa ny olom-pirenena Singaporeana tsirairay sy ny mponina rehetra satria manana karazana firazanana maro ny fiarahamonina ao Singapaoro.
Nilaza ihany koa izy fa zo manam-petra ny zon'ny tsirairay hanaparitaka hevitra ao amin'ny aterineto .
Ny olona fahatelo, bilaogera mpianatra iray 17 taona , dia hiatrika fitsarana amin'ny 26 Oktobra. Fantatra fa voampanga tamin'ny fiampangana miisa fito izy tamin'ny fandranitana lolompo tao Singapaoro teo ambanin'ny Lalànan'ny Fandranitana andininy Faha 29.
Fantatra fa miatrika sazy hatramin'ny telo taona an-tranomaizina raha hita fa meloka ny Singaporeana raha voampanga amin'ny fandranitana (fampisaraham-bazana).
Azonao jerena eto sy eto ireo fanehoan-kevitra farany mikasika ity sazy an-tranomaizina ity. .